खुसीको खबर ! चीनका बरिष्ठ वैज्ञानिकको भविष्यवाणी–‘४ हप्तामा विश्व सामान्य अवस्थामा फर्कन थाल्नेछ’ – Sanchar Patrika
खुसीको खबर ! चीनका बरिष्ठ वैज्ञानिकको भविष्यवाणी–‘४ हप्तामा विश्व सामान्य अवस्थामा फर्कन थाल्नेछ’
काठमाडौं। चीनका सबैभन्दा बरिष्ठ को’रोनाभा’इरस विशेषज्ञले आगामी ४ हप्तामा पूरै विश्वको अवस्था बदलिने भविष्यवाणी गरेका छन् । उनले आगामी ४ ह’प्तामा पूरै विश्वको अवस्था पहिलेजस्तै सामान्य अवस्थामा फर्कन सुरु हुने बताएका हुन् । उनका अनुसार यो अवधिपछि को’रोनाभा’इरसका नयाँ सं’क्र’मणका केसमा कमी आउनेछ । उनले चीनमा अब को’रोनाभा’इरसको दोस्रो आ’क्रमण नहुने समेत भविष्यवाणी गरेका छन्।
को’रोनाभा’इरस सं’क्रमण नियन्त्रण र उपचारका लागि चीन सरकारले गठन गरेको मुख्य टिमका प्रमुख डा. झांग नेनशेनले यस्तो भविष्यवाणी गरेका हुन् । ८३ वर्षीय झांगले भने ‘चीनमा को’रोनाभा’इरसको दोस्रो आ’क्र’मण हुने छैन किनकि हामीले मनिटरिङ सिस्टमलाई अत्यन्तै बलियो बनाएका छौं ।’ डा. नेनशेनले शेनझेनको एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा यस्तो बताएको डेलिमेलले उल्लेख गरेको छ।
डा. नेनशेनले भने ‘को’रोनाभा’इरससँग लड्ने २ मात्र तरिका छन् । पहिलो हामीले सं’क्र’मणको दरलाई सबैभन्दा कम स्टरमा जैजाउँ र त्यसलाई बढ्नबाट रोकौं । यसबाट हामीलाई भ्याक्सिन बनाउन समय प्राप्त हुनेछ र हामीले यो रो’गलाई समाप्त गर्न सक्नेछौं । दोस्रो तरिका यो हो कि सं’क्र’मणमा ढिलाइ ल्याउँ र आफ्ना केही बि’रा’मीको संख्यालाई अलग अलग तरिकाले कम गरौं । धेरैजसो देशले को’रोनाभा’इरसको सं’क्र’मणलाई लिएर कडा कदम उठाएका छन् । यस्तोमा मलाई आशा छ कि आगामी ४ हप्तामा नयाँ सं’क्र’मित भेटिन लगभग बन्द हुनेछ।’
डा. झांगले अहिले पनि चीनमा लाखौं साइलेन्ट को’रोना क्यारियर भएको हल्ला फैलाइएको भन्दै यो झुटो भएको बताए । उनले भने ‘हामीले ती सबै बि’रा’मीलाई अस्पतालमा भर्ना गरिसकेका छौं जसमा भा’इरसको सं’क्र’मण छ तर लक्षण देखिएको छेन । यस्ता बि’रा’मीलाई एसिम्टोम्याटिक केस भनिन्छ । एसिम्टोम्याटिक के’सबाट सं’क्र’मण बढ्ने ख’तरा चीनमा धेरै छैन । किनकि अहिलेसम्म हामीले यसको प्रमाण भेटेका छैनौं।’
डा. झां’गले जो बि’रामी यो भा’इरसबाट सं’क्र’मित भएर निको भइसकेका छन् उनीहरु पुनः यो भा’इ’रबाट सं’क्रमित हुने आशंका निकै कम भएको बताए । यदि यस किसिमका केस आइहालेमा पनि उनीहरुबाट सं’क्र’मण फैलिने खतरा निकै कम हुने उनले बताए । ‘यो दुर्लभ हो किनकि उनीहरुको शरीरमा पहिलेदेखि नै एन्टिबडीहरु हुन्छन् जो भा’इरससँग लडि’रहेका हुन्छन्’ उनले भने।
Prevएक–एक घन्टाको फरकमा छुट्ने गरी सरर गुड्न थाले बस
Nextमयुर यातायातले चलाउन थाल्यो काठमाडौंमा बस, यस्ता छन् रूट
OMG<<२२७ बालबालिकाको सा,मूहिक ब,लि !
लोकप्रिय डाक्टर जसले नारायणीमा हज्जारौ बचाए, तर आफै अल्पआयुमा नै सँधैका लागि अस्ताए
नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने ओली प्रचण्डको सहमति, को-को बन्दैछन् मन्त्री ?
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबिरुद्धको भ्याक्सीन पनि सबै भन्दा पहिले चीनले नै दिने ! (2270)